Myanmar's response to COVID-19 (Part 3)
An interview with Dr Kyi Min, Senior Health Specialist, Myanmar Health and Development Consortium (see Myanmar language below) ___________ Forum : Are the COVID-19 figures from Myanmar accurate?
Myanmar government has been accused of covering up COVID cases because the confirmed cases as well as testing rate are low compared to neighbouring countries. Legacy of mistrust to the (Myanmar) government, originated by previous regimes (Burmese Socialist Program Party, State Law and Restoration Council etc.) is still affecting the current government. The current low incidence of COVID is considered to be genuine because of the following:
(a) If there are any unexplained deaths or illnesses (assumed as COVID-19) in Myanmar, social media will pick up the news anytime. The local outbreaks could not be covered up by the government. (b) Frontline health care workers at the public hospitals and general practitioners are the most vulnerable. There is still no significant number of health workers had been affected by COVID in Myanmar. The number of sick health care workers would beaproxy indicator of COVID situation. (c) The personal protective equipment (PPE) especially masks are relatively cheaper and widely available now with local production.
This is an incredible success of the government in keeping the infection low for the first wave. Myanmar has continued to prove possible and manageable with limited resources. The success is due to serious commitment and practical actions taken by the current leadership of Myanmar as well as the unity and generosity at the community level to support the government.
Forum: What actions have been taken?
Myanmar State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi started to use Facebook to directly communicate with the people regarding COVID-19 with regular updates with health messages on “do’s and don’ts”. She also showed how to wash hands properly in national TVs and encouraged people to wash hands often. She herself is chairing the central committee on prevention, control and treatment of COVID-19 has regular meetings and updates, twice weekly video conferencing with different groups of people affected by COVID-19 to find out their needs and to encourage them.
On her Facebook she mentioned that properly wearing of face masks is most effective way to prevent COVID which is transmitted through respiratory tract. The State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi announced during the second week of May that she would holdacloth-mask making contest to encourage people to wear affordable and reusable masks. Wearing cloth-masks started to become popular after the contest.
Local community volunteer groups mobilized resources to help the needy families with essential food items and later with cash transfer. Community volunteers also helping out with proper screening of returning migrants across the borders and sending them to designated quarantine facilities. There isagood cooperation by the returnees to comply with quarantine procedures. With limited resources, the government uses “the whole country” approach effectively.
We should acknowledge the effort of Myanmar government and the Ministry of Health and Sports for their COVID prevention, control and treatment activities with the limited resources and to give priority to the most vulnerable groups. It is hope that the second wave and subsequent waves could be overcome with “whole-of-nation” approach.
မြန်မာအစိုးရသည် ကိုဗစ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု နှင့် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းထိမ်ချန်ထားမှုရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခံနေရပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် နှိုင်းယှဥ်ကြည့်လျှင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ လူနာဦးရေနှင့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုနမူနာများမှာလည်း နည်းပါးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း ခေတ်အဆက်ဆက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရအစိုးရများ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥ်ပါတီအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကောင်စီစသည့်) အပေါ် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်း၏ ဆိုးမွေသည် ယခုအစိုးရလက်ထက်၌ လည်းဆက်လက်သက်ရောက်မှု ရှိနေသေးသည့် အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် နည်းသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း အောက်ပါအကြောင်းအရာများ ကြောင့်ထိမ်ချန်မှုမရှိဘဲ မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
(က) အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရှင်းပြနိုင်သော သံသယဖြစ်ဖွယ် ဖျားနှာမှု (သို့) သေဆုံးမှု (ကိုဗစ်−၁၉ သံသယကြောင့်ဟုဆိုပါစို့)၊ လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာများမှ ယင်းဖြစ်ရပ်များသတင်း အကြောင်း အချိန်မရွေး သိရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းကိုလည်း အစိုးရမှ မည်သို့မျှပင် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
(ခ) အစိုးရဆေးရုံများမှ ရှေ့တန်းတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ နှင့် ဆရာဝန်များသည် ရောဂါကူးစက်နိုင်ရန် အများဆုံးသော အနေအထားတွင်ရှိသောသူများ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သည် သိသာစွာ ရောဂါကူးစက်ခံရ မှု မရှိသေးပါ။ ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းများလာလျှင် လူနာများကိုကြည့်ရှုကုသပေးသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများလည်း ကူးစက်ခံရမှု ပိုမိုရှိနိုင်သည့် အတွက် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရည်အတွက်သည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို သွယ်ဝိုက်စွာညွှန်ပြနေနိုင်ပါသည်။
(ဂ) တစ်ကိုယ်ရေရောဂါကာကွယ်ရေး၀တ်စုံ (PPE) အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းများသည် လွယ်ကူလက်လမ်းမှီစွာ နေရာတိုင်းတွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ၍ ရနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါအချက်အလက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပထမလှိုင်းကို ထိခိုက်မှုနည်းအောင် လုပ်နိုင်သည်မှာ အတော်ပင် အားရစရာကောင်းသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကန့်သတ်မှုရှိသောအရင်းအမြစ်များနှင့် ကိုဗစ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းမွန်အောင် စီမံကိုင်တွယ် နိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလိုအောင်မြင်မှုမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရှိဦးဆောင်နေသော အစိုးရ၏ အ‌လေးအနက်ထားသည့်တာဝန်ယူမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု နှင့် လက်တွေ့ကြသော ဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အစိုးရအပေါ် ပြည်သူလူထုများကလည်း စည်းလုံးညီညွှတ်စွာနှင့် စေတနာထက်သန်စွာ အောက်ခြေအဆင့်တွင်လည်း ကူညီပေးမှုများတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း ကိုဗစ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူလူထု နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အသိပေးနိုင်ရန် အတွက် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာဖြစ်သည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး သူမ၏လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ “ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်” အချက်များကို လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် သူမသည် ပြည်တွင်း ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း မှလည်း လက်ကို မည်သို့ စနစ်တကျဆေးရမည်ကို ကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့ပြီး ပြည်သူများကိုလည်း လက်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံတော်အဆင့် ကိုဗစ်−၁၉ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ၏ ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးရသတင်းများရယူခြင်း၊ ကိုဗစ်ကြောင့် ထိခိုက်သက်ရောက် မှုရှိခဲ့သော ပြည်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရန် နှင့် အားပေးရန်အတွက် တစ်ပတ်နှစ်ခါ အင်တာနက်မှ တဆင့် ဗီဒီယိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
သူမ၏ဖေ့စ်ဘွတ် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းများကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် ကူးစက်သော ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို အထိရောက်ဆုံးသော ကာကွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ မေလဒုတိယပတ်တွင်လည်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဝတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်း ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထုအား ဈေးသက်သာပြီး ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသော ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းများကို ဝတ်ဆင်ရန်အတွက်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်သူလူထု နှင့် စေတနာဝန်ထမ်းများကလည်း မိမိတို့တတ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းကာ အကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိသော မိသားစုများကို လိုအပ်သော အစားအစာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စေတနာဝန်ထမ်းများကလည်း နယ်စပ်များမှ ပြန်လာသော ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားများကို သေချာစွာစီစစ်ခြင်းများ နှင့် သတ်မှတ်ထားသော quarantine နေရာများတွင် နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ပို့ဆောင်ကြည့်ရှုပေးခြင်းများဖြင့် အကူအညီများ ပေးခဲ့ကြပါသည်။ နေရပ်ပြန်လာသူများအား quarantine လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီဖြစ်အောင် ကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် “တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ” လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် မိမိတို့တွင် ရှိသော အရင်းအမြစ်များဖြင့် နည်းလမ်းများကို အကောင်းမွန်ဆုံး နှင့် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြု့လျက် ရှိပါသည်။
ကျွှန်ုပ်တို့သည် မြန်မာအစိုးရ နှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန တို့၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကိုဗစ် ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများကို ရှိသည့် အရင်းအမြစ်များဖြင့် အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသော သူများအား ဦးစားပေး အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် အသိအမှတ် ပြုသင့်ပါသည်။ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း နှင့် နောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကိုလည်း “whole-of-nation” ဆိုသည့် “တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ” နှင့် အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်ဟု လည်း မျှော်လင့်ထားပါသည်။